Global Voices teny Malagasy » Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya · Global Voices teny Malagasy » Print
Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya
Voadika ny 16 Janoary 2014 5:50 GMT 1	 · Mpanoratra Syria Untold Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Syria, Ady & Fifandirana, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta
Vehivavy Syriana manangana ny sainan'ny revolisiona Syriana. Loharanon-tsary: Syria Untold
Niarahana navoaka tao amin'ny Syria Untold  ity lahatsoratra ity.
Darayya, tanàna manodidina an'i Damasy izay ahitana mpikatroka mpandala ny fandriampahalemana tahaka an'i Ghiath Matar sy Yahya Sherbaji, no mijoro ho sariohatry ny hetsika Syriana tsy manao herisetra. Anisan'ny mpikambana ao amin'ity hetsi-bahoaka sivily ity ihany koa ny vondrom-behivavy antsoina hoe Ireo Vehivavy Afaka Ao Darayya , izay nirotsaka an-tsehatra tamin'ireo fihetsiketsehana sy fisantaran'andraikitra marobe nanomboka tamin'ny fiandohan'ny fitroarana tamin'ny lohataona 2011.
“Tsy nifankafantatra izahay talohan'ny fitroarana”, hoy ny vehivavy iray nandritra ny resadresaka niarahana tamin'ny Syria Untold. “Ny fihetsiketsehana nahazo olona marobe teny an-dalambe ho fitakiana ny rariny sy ny fahafahana no nampiray anay”.
Efa nandray anjara tamin'ireo fisantaran'andraikitra sivily talohan'ny taona 2011, ny sasany izay nanana anjara toerana lehibe tamin'ny fanomanana ny fitroarana, tamin'ity vondrona ity. Nanomboka ny taona 2003, niasa tamin'ny fanentanana maromaro tahaka ny vaomieran'olom-pirenena momba ny fanadiovana sy ny fihetsiketsehana manohitra ny fananiham-bohitr'i Etazonia tao Iraka ireo tovolahy sy tovovavy avy ao Darayya. Nandray anjara tamin'ny fananganana izay nalaza taona vitsivitsy taty taoriana, nandritra ny lohataona arabo, ho Hetsika Sivily Syriana ihany koa ry zareo. Efa tamin'izany fotoana izany ry zareo no nosokajian'ny fitondrana ho mampididoza, ka nisambotra mpikambana maromaro tao aminy ny fitondrana.
Ny fisantaran'andraikitra voalohany nampiavaka sy nanamarika ity vondrom-behivavy ity tao anatin'ny fihetsiketsehana sivily dia ny sit-in mitaky ny famotsorana ireo gadran'ny fanehoan-kevitra tamin'ny volana Aprily 2011. Tamin'izany fotoana izany, nanamafy ny famoretany an'ireo mpanao fihetsiketsehana milamina ny fitondrana tamin'ny alalan'ny famonoana, fisamborana ary fampijaliana mpikatroka an-jatony. Lasibatra tamin'ity fihetsiketsehana voalohany ity ihany koa ireo Vehivavy Afaka ao Darayya, izay niafara tamin'ny fitifiran'ny tao amin'ny fitondrana azy ireo.
Tsy nahasakana ny vondrona ny hirotsaka bebe kokoa amin'ny fisantaran'andraikitra marobe, tahaka ny fihetsiketsehana nandraisan'ny besinimaro antsoina hoe Zoma Mahafinaritra, narahan'ny Asabotsy Mainty, voamariky ny fisamborana sy famonoan'ny fitondrana ireo mpanao fihetsiketsehana an-jatony.
Satria miha-sarotra hatrany ny toe-draharaha eny ifotony, ary mety hampidi-doza ireo mpikatroka, nanomboka nikarakara fihaonana ny vondrona mba hametraka ny tetikadin'izy ireo, mifantoka amin'ny zavatra tahaka ny fifandraisana ohatra, sy nanao atrikasa hoan'ireo vehivavy mitady sy mampiroborobo fiovana ao amin'ny firenena. Nahasarika olon-kafa maro tsy mahazo aina amin'ny fanatrehana fihetsiketsehana fa mitady fomba azy manokana ho fandraisany anjara izany fihaonana izany.
Nitarika ny asan'ny vondrona ho matihanina kokoa ireo fihaonana ireo, izay nizara andraikitra tahaka ny fifandraisana sy ny seraseram-bahoaka, ny sary, ny fampaherezana ara-toetsaina sy famonjena mahaolombelona, ary ny mandrakitra ny hetsika sy ny asan'izy ireo ao amin'ny tranonkalan'ny vondrona.
Raha manery mafy ny ao an-tanàna ny fitondrana, amin'ny fisamborana ireo mpikatroka tia filaminana malaza tahaka an'i Ghiath Matar, sy ny fidarohana baomba ny tanàna mba hampangina ny fihetsiketsehana, dia mbola nanohy nampivelatra ny fikatrohan'izy ireo eny ifotony ireo Vehivavy Afaka ao Darayya. Nandritra ny vanim-potoanan'ny krismasy, nanaingo hazo  ahitana ny anaran'ireo gadra ao am-ponjan'i Syria izy ireo, ary nanangona taratasy avy amin'ny reny sy ny zanak'izy ireo mba hamoaka izany amin'ny sora-baventy eny amin'ny arabe. Niasa taminà fisantaran'andraikitra hafa marobe tao amin'ny faritra ihany koa izy ireo, hatramin'ny fanampiana vonjy taitra sy vonjimaika sy ny maha-olona hatramin'ny famoahana ny gazetim-paritra, Ny Voaloboky ny Fireneko  (“Enab Beladi” amin'ny teny arabo).
Nanasa ireo vehivavy avy amin'ny tanàna hafa, tahaka an'i Sednaya ihany koa ny vondrona mba hanatevin-daharana azy ireo sy hiara-hanohitra ny fikasan'ny fitondrana hampisara-bazana ny Syriana sy hampiteraka fisaratsarahana eo amin'ny fiarahamonina maro sy isan-karazany.
Raha natao fahirano ny tanàna tamin'ny volana novambra 2012, voatery nandao an'i Darayya ny ankamaroan'ireo vehivavy. Maro ireo niverina nody volana vitsy taty aoriana mba hahita ny tanànany rava sy ireo olony novonoina. Tsy nanakana azy ireo hiverina hiasa indray anefa izany, ka nifantohana tany amin'ireo olona marobe mila fanampiana sy sakafo, raha miatrika fisamboran'ny fitondrana ny mpikambana maro ao aminy.
Amin'izao fotoana izao, any am-ponja na voatery niala ny tanindrazana ny ankamaroan'ireo vehivavy. Na dia izany aza, mbola manohy ny asany amin'ny olana mikasika ny zon'ny vehivavy izy ireo, na izany ao Ejypta na izany ao anatin'ny fonjan'ny fitondrana Syriana, miandry ny fotoana hahafahany miverina ao Darayya, tanàna izay nijoro nanohitra ny tsirefesimandidy amin'ny tsy fanaovana herisetra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/01/16/56183/
 Ireo Vehivavy Afaka Ao Darayya: http://syriauntold.com/en/work-group/7479
 nanaingo hazo: http://syriauntold.com/en/media/2013/12/19/7475
 Ny Voaloboky ny Fireneko: http://www.syriauntold.com/en/story/2013/11/06/6402